Antony Raj Jayamani mpanaraka anay avy ao amin'ny Linkin | Asa - Karama - Travel Love Dubai!
Antony Raj Jayamani mpanaraka antsika avy ao Linkedin
7 toro-hevitra ho an'ny fampandrosoana fahaiza-manao mahomby
Enga anie 18, 2019
[ARForms_popup shortcode_type = 'popup' id = 101 desc = 'Ampiharo eto!' type = 'fly' position = 'left' high = 'auto' width = '800' angle = '90' bgcolor = '# ff6529' txtcolor = '# ffffff']
Antony Raj Jayamani mpanaraka anay avy ao amin'ny Linkin. Nahavita nandefa mailaka haingana taminay izy sary navaozina avy any Dubai.
Inty aho tonga tany Dubai ary nanomboka ny asako tamin'ny martsa 5th 2018. “Nandritra ny nahatongavako tany Dubai, tsy nisy valiny aho ary tsy nisy niely iray momba izao tontolo izao. Taorian'ny herintaona dia nanao ahy ho lehilahy i Dubai ary nanome ahy fitokisana bebe kokoa avy eo nahazo fahalalana bebe kokoa. Dubai dia nampiseho fahazavana avy amin'ny haizin'ny fiainana teo amin'ny asako. Ankehitriny dia lasa toy ny trano faharoa, tiako ny mijanona ao Dubai. Maniry ny fahombiazana mahomby indrindra amin'ny fitomboana ao Dubai aho. Misaotra betsaka an'io sehatra io aho hamelabelatra ny fampianarako.
Nahoana i Antony no misafidy an'i Dubai?
Tsy misy teny afaka mamaritra ny Dubai sy ny mpitarika azy. Betsaka ny expats avy any India no namangy an'i Dubai farafahakeliny 2 farafahakeliny dia maniry an-dry zareo ho velona izy ireo ary hiasa any. Tena tsara sy milamina daholo ny zava-drehetra. Tahaka ny lanitra ety an-tany.
Noho izany, maro faly. Maniry tokoa izahay fa ny firenentsika hiaina toa ny Emira Arabo Mitambatra. Ankoatra izany, dia hitantana amin'ny maha mpitarika an'i Dubai manaraka ny ohatra iray amin'ny fomba tokony hiarahan'izy ireo amin'ny olom-pireneny. Manana izao tontolo izao i Dubai. Oh, Dubai no toerana tsara tarehy handanianao ny fiainanao. Manantena izahay rehetra fa hahita Jobe any ho lasa Mpanamboatra Hetsika na mpitantana.
Misy tanjaka ara-tsosialy marobe any!
Ny tanànan'ny orinasam-piainana any Dubai, ary izany no voalaza rehefa manidina any Dubai ianao ary miasa eto. Tsy hahatsiaro ho manirery mihitsy ianao, tia mandray olona, ​​nahita fianarana sy ny sisa. Mety hanomboka kely fotsiny ny fihazana asa, noho ny fifaninanana eo amin'ny tsena ankehitriny. Ary izany no nahatonga ny olona hisafidy ny toerana tsara tamim-pahakingana ary ny olona mahay za-draharaha dia homena toerana kokoa ho an'ny asa tsara kokoa.
Ary raha dia ho sahirana amin'ny hoavy, koa raha miomana tsara ianao dia miomàna, fara fahakeliny, miomana mba hahafahan'ny orinasa sasany manolotra vola be fa tsy mandany vola be amin'ny fanakaramana ny matianina, ary rehefa mitady asa any Dubai ianao dia mahazo antoka tsara amin'ny tranokala tena izy. Ny tranokala diso dia mety hamandrika anao eo ambanin'ny elany ary mangataka vola, raha toa kosa Tsy misy orinasa hangata-bola amin'ny karazana fandraisam-bahiny rehetra.
Dubai dia tsy mora akory ny mahazo ny tanjaky ny asa
Ambonin'ny zavatra rehetra dia hiteny aho fa tsy an'izany mora misosa amin'ny asa tiana, aza misafidy toeranao amin'ny toerana misy anao amin'ny indostria tianao. Ary rehefa vita ny fifanarahanao voalohany amin'izy ireo andramo ny mangataka toerana hafa any UAE. Ary hahazo ny toeranao tianao ianao rehefa manana santionany traikefa any Dubai.
DUBAI, ny masoko, ianao dia Dream, Unique, Beautiful,
Amanazava sy Inspiring.
Tena tia ny tanànan'i Dubai izahay rehetra!
Dubai dia iray amin'ireo be indrindra ny orinasam-barotra ankehitriny any Afovoany Atsinanana. Mifangaro ao Indian ary Pakistaney, ankoatra ny Iraniana sy Filipino voaroakan'ny firenena. Ny tanàna dia tontolo maoderina, mahavelona ary mahaliana ary toerana samihafa ho an'ny mponina rehetra.
Tena tsy mahagaga ny mahita ireo kolontsaina maro samihafa any amin'ny toerana iray ary miditra mahalala ny kolontsaina arabo amin'izany fotoana izany.
Betsaka ny toerana ao an-tanàna ho an'ny mikaroka sy amin'ny fahafinaretana. Androany isika hahita trano fisakafoanana sy hidy. Faritra iray tena mahaliana dia Dubai Marina, faritra feno trano fisakafoanana sy fisaka mahafinaritra miaraka amin'ny fomba fijery mahafinaritra ao amin'ny hotely iray Burj Al Arab. Azonao atao ny mahatsapa ny tontolo manodidina ny Arabo manandrana sakafo Arabo mahazatra raha manana shisha-dia fitaovana fifohana sigara eo an-toerana misy tsiro hafa. Barista no toerana faharoa izay feno trano fisotroana sy kafe tsara izay hahafahanao mankafy mifangaro amin'ny olona be dia be manerana an'izao tontolo izao ary manana fotoana lehibe.
Maro ny zavatra tokony hatao any Dubai
Ny fahatelo dia ilay klioba Armani any Burj Khalifa. Fikambanana mihaja manana tontolo iainana tsara, mozika tsara sy akibory matsiro. Ary aza manadino ny tany lemaka. Raha mbola tsy tany amin'ny mandao izany tsy mbola tany Dubai ianao. Ny fandehanana any amin'ny faritra lemaka any an-efitra dia iray amin'ireo traikefa lehibe indrindra. Mitsambikina miaraka amina fiara be karatra amin'ny fasika, mitaingina rameva, misakafo rehefa mijery ny dihy arabo dia traikefa tsy hay hadino izay tsy maintsy atao rehefa mitsidika an'i Dubai.
Fa momba izany, haseho ao amin'ny lahatsoratra manaraka aho ho hitantsika any an-tany efitra sy izay te-hiantsena any Dubai. Ity tanàna ity dia manafina toerana sy hetsika mahagaga. Ny Dubai dia iray amin'ireo tanàna mahaliana sy mahavariana indrindra eto an-tany.
Mijanona ho an'ny fanandramana manaraka!
I Dubai no nantsoina hoe tanànan'ny orinasa, nefa voalaza fa olona an-tapitrisany no manidina any Dubai mba hanao asa na orinasa madinika ary tsy hahatsiaro ho manirery intsony ho lasa fonenany faharoa. Tia mandray olona ny olona, ​​nahita fianarana ary be dia be ny hotadiavina ao Dubai.
Inona no mampiavaka an'i Dubai?
Mihabe isan'andro isan'andro i Dubai, nandritra ny taona maro niova ho azy, Expo 2020 dia mialoha fa ny any amin'ny firenena 190 no handray anjara amin'ny Oktobra 2020 manaraka. Ny fanamboarana metro iray any Dubai dia mahatonga ny fandehanana mora kokoa, ny fifamoivoizana be eny an-dàlana dia miteraka fahasosorana ary misafidy ny metro ny olona fa tsy mitaona fiara fitateram-bahoaka na taxi-be, ankoatr'i Dubai dia manana endrika marisialy maoderina sy sehatra marim-pototra maoderina, toeram-pisakafoanana maro be azo isafidianana Ny olona ao Dubai dia sakafo lehibe, azonao atao ny manandrana sakafo toa ny sakafo maneran-tany.
Dubai dia fantatra ihany koa fa iray amin'ireo tanàna milamina indrindra eto an-tany, fa ny tahan'ny famonoana olona dia kely kokoa, ary i Dubai irery no tanàna eto amin'izao tontolo izao izay manana Supercars Exclusive, dia miverina amin'ny fotoana izay ankafizin'ny olona any Dubai ny fiara, mba hahaliana kokoa ny polisy Dubai nanisy famelezana ny sandan'izy ireo izay ahitana an'i Buggati, Aston Martin, Rolls Royce, sy ny maro hafa. Dubai dia malaza amin'ny toerana malaza Celebrity, raha ny fahitana ny Fetin'ny sarimihetsika, lanonana fankalazana isan-tsegondra.
Ireo mpisehatra manerantany no mandro fitiavana an'i Dubai ary niresaka ho toy ny tranon'izy ireo faharoa, tonga eto izy ireo hiantsena, hihaona ary mpankafy amin'ny mpankafy ary ho an'ny filma sarimihetsika indrindra any amin'ny toerana Breathtaking toa an'i Burj Khalifa, Burj Al Arab, ary Jumeirah Beaches, ankoatry ny seho showbiz, fantatsika fa ny Dubai dia manao asa soa amin'ny habetsaky ny lehibe kokoa, ny olona eto dia mino fa miahy ny fifampizaràna ary mitaky ny hanampy an'i Poor on the go. isaky ny tafita izy ireo mety ho tonga ao anatin'ny fotoana tsy azo antoka izy ireo mba hahazoana antoka fa azo antoka.
Ny mpitondra an'i Dubai HH Sheikh Mohammed bin Rashid al Maktoum sy mpilalao Hollywood Tom Cruise (Arabian Business)
Dubai dia natao ho an'ny mpikaroka ihany?
Ilay mpikaroka asa any Dubai dia afaka miaina sy mihinana maimaim-poana amin'ny toerana sasany, fa ny vahoakan'i Dubai kosa nanitatra ny sandriny manampy ireo mpikaroka amin'ny asa araka izay azony atao dia manomboka haka sary an-tsaina ny olona raha tena maimaim-poana izany, tsy natao ho an'ny olon-drehetra rehefa miteny aho fa misy, misy ireo vondrom-piarahamonina manokana izay mikarakara tsara ny mpitady asa, izany dia mampiseho ny maha-olona ao amin'ny olona izay miezaka manampy ny sahirana.
Na na raha tsy maintsy miaina ao amin'ny habaka bakalorea ianao dia manana safidy maro miaraka amin'ny vidiny mora miaraka amin'ny serivisy mikorontana, misy trano fandraisam-bahiny izay misy ihany koa amin'ny toerana sasany afaka miasa amin'ny fotoana fohy ny fiankinan'ny mpampiasa, alohan'ny hidioanao any Dubai, dia tsy maintsy manao fikarohana sahaza manokana ho an'ireo olona mahita fa vahiny ao an-tanàna izy ireo, ho an'ireo afaka manana namana na fianakaviana dia afaka mifanerasera mora.
Tokony ho fantatrao koa ny lalàna mifehy ny fifamoivoizana any Dubai, mitandrema rehefa miampita mpandeha an-tongotra dia mety handoa hetra be ianao noho ny tsy fanarahana ny fitsipika, ny fanariana fako eny an-dalana, ny fandorana ny làlan-kaleha mety hiteraka korontana, koa miambena ianao ary esory ny hetsika toy izany. tsy maintsy mitondra kopia visa miandany amin'ny lafiny azo antoka satria azon'ny polisy iarovana anao amin'ny tsy fitazanao ny antontan-taratasy ilainao mandra-pahatonganao ny ID Emirates, izay ho azonao izany rehefa avy mametraka asa ianao, ireto ny sasany ary dont's.
Ahoana no hanombohana asa any amin'ny UAE?
Ny hanombohana amin'ny fihazana asa dia mety hitranga kely, noho ny fifaninanana eo amin'ny tsena ankehitriny dia mifidy ny toerana amin-tsaina, dia misy olona avy amin'ny firenena isan-karazany izay manana talenta sy fahaiza-manao ary olona mahay za-draharaha dia homena toerana tsara kokoa izay.
Noho izany, raha toa ny fresher dia zara raha mahazo fialam-boly, koa raha toa ianao ka voaomana hiomanana tsara dia ataovy farafaharatsiny, vonona vonona ka ny orinasa sasany afaka manolotra habetsaky ny vola fa tsy mametraka be dia be amin'ny fanakaramana ny matianina antonony, ary misy mpanara-maso sasany koa manara-maso. mpitady asa any Koety.
Freshers manokana, ankoatr'izay dia rehefa mitady asa any Dubai ianao Fantaro tsara ny tranokala tena izy, mety ho voafandrika eo ambanin'ny elany ny tranokala tsy marina ary mangataka vola, raha tsy misy orinasa hangataka vola misy karazana fandraisana isan-karazany raha hitanao ny iray amin'ireo toe-javatra ity dia tokony ho mailo.
Mba hialana amin'ny hetsika toy izany dia mila mahazo antoka ianao Google ny biraony ary vakio ny valiny an-tserasera mba hialanao antoka ary hahita mpiasa miasa ihany koa ianao mikarakara ny dinidinika ho an'ireo kandidà mendrika izy ireo tahaka ny fiainanao mifandraika amin'ny fiainanao ary angataho ny ampaham-bolan'ny karamanao voalohany raha toa ianao ka manao sonia taratasy fangatahana, zavatra tsara izany mba ho marina, satria izy ireo koa dia mifandray amin'ny orinasa manamora ny asanao kokoa izy ireo, ka lasa olona marina izy ireo dia tsy matahotra ny hosoka eto amin'ny misy azy ireo eto hanampy Freshers.
Ampiasao fotsiny ny asa ara-dalàna ao Dubai!
Ho hitanao ihany koa ny serivisy CV Distribution Services any UAE, ny tenako manokana dia manoro hevitra aho mba tsy hisafidy an'izany satria mizara ny CV anao fotsiny izy ireo amin'ireo adiresy mailaka ankapobeny an'ny orinasa tsy miankina izay hahitana azy ireo tranonkala na kaonty LinkedIn, raha afaka manao zavatra toy izany ianao amin'ny alàlan'ny fisavana mailaka mailaka amin'ny tranokalany manaraka.
Ankehitriny any UAE Ny fananganana vavahady sandoka dia lasa zavatra iray, mamokatra vola amin'ny alàlan'ny olona tsy manan-tsiny, ireo olona avy any amin'ny tanàna samihafa Mianjera mora foana izy ireo, ary tsy mieritreritra akory hoe rehefa mandainga be dia be izy ireo miandry asa ho valiny, sa tsy hain'izy ireo ve ny momba an'ireto mpisoloky ireto dia mahita hatrany an'ireo olona ireo i Dubai ary mandefa hafatra fampitandremana manerana an'i UAE hanavotana ny olona amin'ny fanaovana hosoka any Dubai.
Ambonin'ny zavatra rehetra hilazako tsy mora ny mipetraha amin'ny asa tiana, aza misafidy toeranao amin'ny toerana misy anao amin'ny indostria tianao, rehefa vita ny fifanarahana voalohany amin'izy ireo andramo ny mangataka toerana hafa ary atombohy ny fikarohana ataonao tena hahazo ny toeranao tianao ianao, ny zavatra niainana no mampianatra anao zavatra maro, hampivoatra ny fahatokisanao azy io, hampitombo ny fahaizanao miasa sy ny maro hafa. Torak'izay koa, ampio ny hafa, manaova tambajotra, mifanena amin'ireo olona vaovao isan'andro hitady fanampiana azy ireo ary tena hanao asa any Dubai, UAE ianao.
Na izany na tsy izany, Raha misy asa mifanaraka amin'ny mombamomba anao, manandrama azafady hamely ny mpitantana HR ASAP. Tokony ho vonona hanome ny serivisinao ianao amin'ny varotra sy marketing / fikambanan'ny mpanjifa / varotra asa na izay mety amin'ny asa nomena anao.
Indrindra ny Ny nofin'i expatriate dia ny hiasa any amin'ny GCC Countries hanamafisana ny fahafahany miasa. Ary tokony ho beam ianao vonona hiasa na aiza na aiza any amin'ireo firenena any Golfa toa an'i Dubai / Qatar / Oman / Abu Dhabi / Bahrain / Kuwait etc.
Raha mbola manome asa ho anao izy ireo, dia any amin'ny faritra Golfa. Ka raha ny fangatahana asa any amin'ny seranan-tserasera an-tserasera nandritra ny taona 4 / 5 farany tsy misy valiny. Miezaha mikapoka kely henjana ihany. Manomeza famerenana ho an'ny ekipanay ary manomboka manantena ny hahazo valiny tsara avy amin'ny "Dubaicitycompany".
Nandritra ny fotoana niainako teto Dubai, dia nody ho toy ny trano
Nandritra ny taona maro dia nihodinkodina teo amin'ny taolako izy.
Tsy noheverina ho kilema mihitsy i Dubai.
Ny minitra rehetra nolaniana dia nankamamy.
Tahaka ny nijery tovovavy iray mamelatra ho vehivavy tsara
Ny mainty & fotsy, tanora & antitra, samy variana mijery an'io tsara io mitombo ny vehivavy.
Toy ny ranomasina mangatsiaka mamihina ny morontsiraka.
Notarihin'i Dubai ny fitiavana rehetra.
Mankany Dubai ..
Hisy tombontsoa lehibe miandry anao!.
- nahazo diplaomana vaovao? Ho kintana miakatra ianao.
- Miditra ve? Ny fianakavianao dia tsy hanana ahiahy amin'ny kolontsain'ny fikarakarana.
- zokiolona? Fotoana hijinjana ny tombony azo avy amin'ny fotoam-pahaizana manam-pahaizana.
Na aiza na aiza misy anao izao, mino izahay fa afaka manana fiovana ankehitriny ianao amin'ny fampidirana anay ao Dubai. Ny tanànanay mahafinaritra- izay ahitana ny tany efitra ny lanitra ary ny Innovation no mitarika serivisy - ny tokantranonao manaraka, ny hetsika lehibe ataonao.
Avia ary ho tafiditra amin'ny tanàn-dehibe tena izy namboarina nandritra ny taona maro tao amin'ny fianakaviana mafana, fifaliana, zava-tsarotra, faharetana ary fanandramana-olom-pirenena niainana hamorona fototra mafy orina ny fiainana mendrika ho an'ny lehilahy sy vehivavy mazoto rehetra.
Manantena ianao fa hanapa-kevitra toy izany Antony Raj Jayamani mpanaraka antsika avy ao Linkedin ho tonga any Emirà Arabo Mitambatra. Ary ny orinasa ao Dubai City dia mahafeno ny fanantenanao amin'ny resaka fanomezana torolàlana momba ny fiasa sy ny monina any Afovoany Atsinanana.
Araho ny Company Company ao amin'ny Linkedin tahaka ny:
Antony Raj Jayamani mpanaraka antsika avy ao Linkedin!
Orinasa DCC izao manome fampahalalana ho an'ny expats. Ny ekipanay dia nanapa-kevitra ny hampakatra vaovao ho an'ny fiteny tsirairay ho antsika Jobs in Dubai Guides. Noho izany, amin'izao fahatsapana izao, afaka mahazo torolalana, toro-hevitra sy asa any Emirà Arabo mitambatra amin'ny fiteninao manokana ianao.
Fifandraisana anatiny: Ny pejinay tsara indrindra!
Asa 100% azo antoka ao amin'ny dubai (2)
Vondrona mpiasa amin'ny whatsapp (1)
¦¦à§ à à à¦¦ (1)
Asa any dubai ho an'ny vahiny 2020 (1)
Izay mora azo.jobs in dubai ho an'ny indiana (1)
Asa vaovao fampianarana any dubai (1)
Upload Resume - Ho an'ny asa vaovao!
Misoratra anarana CV any UAE!